International Drivers Permit Information for USA Travel
Kudzivirirwa & Inishuwarenzi Visa & Passports
Tsvaga Kana Iwe Unoda International Drivers Permit ku USA
Haisi ivo vatyairi veAmerica avo vanofanirwa kufunga nezveMitambo yeDzivhisi Dzakabvumirwa (dzimwe nguva dzinonzi International Driving Licenses.) Aya mabvumirwo anofanirawo kufungidzirwa kune vanofamba munyika dzakawanda vanouya kuUnited States. Vafambi vanobva kune imwe nyika kuenda kuUnited States, kana kushanyira bhizinesi kana kushandiswa kwevanhu, vanokurudzirwa kudzidza kana vachifanira kuwana International Drivers Permit kana kwete.
Kutyaira muUnited States Sekune imwe nyika
An International Drivers Permit inofanira kushandiswa pamwe chete nemvumo yakakodzera kubva kumusha wevatyairi. Inopa shanduro yeiripo yeirivha yekutya mumitauro yakasiyana siyana uye inopa mamwe mashoko ekuzivisa, akadai semufananidzo, kero, zuva rokuberekwa, nezvimwewo. IUnited States haibvumi maDPP kune vanoenda kunze kwenyika, saka zvakakosha kuwana imwe isati yasvika muUnited States.
Apo Vashanyi Vanobva Kunze kweUnited States Vanoda International Drivers Permit
Vatorwa vokune imwe nyika vanogona kudikanwa neDID kuendesa kuUnited States. Semuenzaniso, munaJanuary 2013, Florida yakada kuti vatorwa vatakure International Driving Permit pamwe chete neirivo ravo rekushaira. Kunyange mumamiriro ezvinhu apo isingadiwi, inogona kunge yakakosha kuva nayo. Izvi zvinogona kusanganisira zviitiko apo zvichangoita kuti zvinyatsozivikanwe, zvakadai apo kana mufambi akadzingwa nemumwe mutongi wemutemo.
Dhipatimendi yemotokari yenyika iyo inobudiswa paisensi yekutyaira yevaenzi inofanira kubudisa IDP. IUnited States haisi mhaka yekuvabudisa kune vatorwa vokunze.
Uyezve, kubhadhara motokari kunogona kubvumirwa neirairi uye IDP , sezvo zvichienderana nechinangwa chekambani yemotokari imwe neimwe.
Mukugadzirira, zvinokurudzirwa kubvunza pamusoro pehutano nemamwe mashoko musati mafamba.
Kubhadhara US License Dhairivha
Vafambi vanogara kwenguva yakareba muUnited States vangada kuisa chikwata chekutya kubva kuhurumende yavanogara, zvisinei, vafambi vanofanira kuziva kuti zvinogona kutora mavhiki akawanda kana mwedzi kuti vapedzise. Vagari vanofanira kushanda muhurumende yavo yehurumende yemotokari kuitira kuti vaongorore zvinodiwa kuti vawane chikwata chekufambisa cheU.S. Izvi zvinowanzosiyana nehurumende imwe neimwe, sekuita mitemo yekufambisa.
Vafambi vanofanira kuve nechokwadi chekutarisa zvinodiwa nehurumende imwe neimwe yevatyairi vemvumo vasati vashandisa. Vachadawo kuongorora kugara kwezvinhu zvinodiwa. Chireisheni chekutyaira kubva kune imwe nyika inobvumira vanofambisa kuenda kune imwe nyika.
Cherechedza Zvidhori zveDIPP
Vafambi vanofarira Mhirizhonga Dzepasi Pese Zvirevo zvinofanira kunge zvichiziva zvingangodaro zvinokanganisa uye nzvimbo dzekutengesa dzinotengeswa nemari. Kuti uwane mamwe ruzivo, vafambi vanofanira kuongorora zvakananga zveMadhora Dhepfenyuro Mvumo. Izvi zvinogona kusanganisira IDP yakaipa iyo inogona kutungamirira kumatambudziko epamutemo uye kunonoka kwekufamba. Kunewo zvivako uye mabhizimisi anotengesa zvinyorwa zvisiri zvechokwadi, saka hazvina maturo.
Vagari nevashanyi vanobatwa neAIDS IDP vangangotarisana nemhosva dzakakomba, kunyanya kana vasina uchapupu hwokuti ndiani. Vaya vanokanganisa vanofanira kuudza unyengeri kune Federal Federal Commission pakarepo.
Nzira Yokuwana IAmerican Passport
Mishanu Yezvokudhura Zvikuru zveVisa MaAmerica Anotarisana
Zvinyorwa Zvinoda Kubvunzwa Munyika Dzepasi Pose Nevana
Unoda Kuenda Visa?
Ko Pasipoti Yangu Ichasvika Paawa Yokufamba Here?
Forbes Travel Guide Nyeredzi Tsanangudzo
Venom One - Miami yeMhinduro yeNyoka yeNyoka
Chirongwa Chekudya kuMuganhu wePortugal wePortugal
Kufamba kubva kuLondon kuenda kuMheposor Castle nebhazi, Terevhi kana Car
5 Maine RV Pakati Paunofanira Kushanyira
Best Family-Friendly Resorts ku Maui
Pemberera Hawaii paArija Aloha Festival
Mexico Kuramba Ita uye Izvozvi
Nhungamiro yeNewC's American Museum of Natural History: Matikiti & Info
Toronto munaJune: Weather, Events, uye Travel Tips
Top Farmers Markets muSt. Louis Area
Best Cocktail Bhari muHouston